Booska Arsenal Ay Ka Dili Doonto Manchester City Kulankooda Axadda Oo La Sii Sheegay - Gool24.Net
Booska Arsenal Ay Ka Dili Doonto Manchester City Kulankooda Axadda Oo La Sii Sheegay
Manchester City kuma jirto xaaladihii caadiga ahaa ee looga bartay muddooyinkii dambe, waxaana saddexdii ciyaarood ee kali ahaa ee ay ciyaartay illaa hadda ay ka keensatay hal guul oo kaliya, waxaana u raacday mid laga badiyey iyo mid barbarro ay gashay, taas oo durba beddeshay saadaashii horyaalka.
Kevin de Bruyne oo ah xiddiga kooxda iyo horyaalka Premier League intaba ayaa shaki la gelinayaa inuu diyaar u noqonayo kulanka muhiimka ah ee ay Sabtida ku qaabilayaan Arsenal, laakiin xataa haddii uu joogo ayaa waxa la sheegay in aanu dabooli kari doonin dal-dalollada kooxdiisa ee ay ka faa’iidaysan doonto Arsenal.
Tababare Pep Guardiola oo saddex saxeex sameeyey intii uu furnaa suuqa iibka ciyaartoyga ayaa waxa uu awoodda saaray khadka dambe ee difaaca oo uu laba ciyaartoy oo cusub kusoo kordhiyey, halka uu garabka weerarkana ku firfircoonaysiiyey hal ciyaartoy oo buuxinaya booskii uu banneeyey David Silva.
Sida uu qoray wargeyska MEN ee kasoo baxa magaalada Manchester, tababare Pep Guardiola ayaa ka dhibaatoon doona difaaca, iyadoo ay Walker, Aymeric Laporte, Ruben Diaz iyo Nathan Ake oo uu ku ladhan yahay Benjamin Mendy ay ku adkaan doonto inay xakameeyaan weerarka Arsenal ee ay hormoodka u yihiin Aubameyang iyo Lacazette.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray in wali uu dildillaac ku jiro difaaca City oo halkii ay ka jabeen ciyaartii ay Leicester City ku garaacday ay ahayd difaacooda aan degganayn ee ay waliba ka muuqatay in aanay isla haysanin, taas oo ay usii raacday barbarrihii ay Leeds wada galeen kulankii ugu dambeeyey oo nasiibkoodu ka badbaadiyey guul-darro.
Arrinta ugu weyn ee la rumaysan yahay in ay Manchester City tebayso ayaa ah difaac hoggaamiye u ah sidii Vincent Kompany oo kale, isla markaana isku-ururin iyo qalbi dhis u samayn kara kooxda oo dhan.
Si kastaba, Kulanka Arsenal ayaa tijaabo kale u ah Manchester City, waxaana haddii ay guul-darro kale soo xareeyaan ay geli doonaan khatar la xidhiidha himilladoodii xili ciyaareedkan ee ahaa inay horyaalka sannadkii hore lagaga guuleystay dib usoo ceshadaan.